Pataloha mangatsiaka → Akanjo fivarotana mangatsiaka • peta-kofehy solosaina P&M
Pataloha frizera ho an'ny asa manokana
Akanjo mangatsiatsiaka sy fivarotana mangatsiaka atolotra ao amin'ny magazay pm.com.pl dia akanjo maro karazana izay mety tsara amin'ny toe-javatra sarotra. Ny karazana voaporofo vita amin'ny akora tsara indrindra dia mahatonga ny fiasan'ny maripana ambany azo antoka sy mahazo aina. pataloha vata fampangatsiahana dia iray amin'ireo singa amin'ny akanjo manokana ho an'ny miasa amin'ny toe-javatra sarotra miasa.
Eo akaikin'ny palitao sy kiraro fanamoriana no ampahany lehibe indrindra amin'ny fitaovan'ny mpiasa. Ao amin'ny pejinay fivarotana, ny akanjo fivarotana mangatsiaka dia voasokajy tsara ho an'ny fikarohana haingana sy mora kokoa.
Dungarees voaroaka ho fiarovana anao amin'ny hatsiaka ka hatramin'ny -45 ° C
Free pants pataloha misy habe manomboka amin'ny S ka hatramin'ny 3XL, ary ny maodelin'izy ireo manerantany dia mety ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy. Dungarees no fitafiana safidy mba hitazomana ny vatana mafana kokoa raha mamela fahalalahana mihetsika.
Nanolotra karazana loko isan-karazany ny mpanamboatra (oh: navy manga, green, blue) ary maodely misy lamina kely amin'ny endrika loko miloko. Ny vidin'ny fifaninanana no vahaolana mety amin'ny olona mitady vahaolana ara-toekarena, ary rehefa mividy habe betsaka kokoa dia azo atao ny manome fihenam-bidy fanampiny.
Pataloha Hi-Glo 25 Coldstore, fiarovana hatramin'ny -64 ° C
Pataloha mangatsiaka sy fivarotana mangatsiaka - safidy azo antoka
Pataloha ho an'ny efitrano mangatsiaka sy ny vata fampangatsiahana vita amin'ny fitaovana voafantina tsara toy ny landihazo na polyester, hiarovana amin'ny hatsiaka na dia -64 degre C. Ny modely natolotra dia manana bokotra milamina, paosy, fampiatoana azo ahitsy mba hampiononana bebe kokoa. Ny pataloha dia manana mari-pankasitrahana mifanaraka amin'ny fanamafisana ny fampifanarahan'izy ireo hiasa amin'ny maripana ambany.
Ho fanampin'izay, raha te-hanaingo manokana ny akanjonao ianao dia afaka manafatra mora foana ny karazany maromaro amboradara amin'ny solosaina na fanontana efijery miaraka amin'ny sary, anaran'ny orinasa, anarana na toerana misy anao manokana. Izy io dia vahaolana tsara indrindra ho an'ireo izay te-hamorona sary orinasa tsy miova.
Manana isika masinina manokanaizany dia ahafahantsika mifehy ny marika isaky ny dingana amin'ilay tetikasa ary mihetsika avy hatrany raha misy fanovana. Ny ekipanay efa za-draharaha dia hanampy amin'ny fisafidianana ireo vokatra ary hanome fanombanana fanamarihana maimaimpoana.
Pataloha mangatsiaka fivarotana